Mogadishu Journal » Al-Shabaab oo laga saaray degaanka Baxdo iyo tiro Meydad ah oo daadsan Jidadka
Waxaa degan xaalada degaanka Baxdo ee gobolka Galgaduud oo saaka aroortii ay Al-Shabaab ku qaaday weerar qaraxyo ku bilowday.
Maleeshiyo ka tirsan degaanka ayaa la sheegay iney iska caabin adag kala hortageen kooxda Al-Shabaab oo sida la sheegay qorshohoodu ahaa iney qabsadaan degaanka.
Dagaalkii ka dhacay degaanka Baxdo ee gobolka Galgaduud ayaa lagu soo waramayaa inuu geystay Khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo soo gaaray dhinacyada isku fara saaray halkaas iyo dadka degaanka.
Khasaaraha ugu badan ayaa la soo sheegayaa inuu gaaray Al-shabaab oo markii dambe lagu qasbay iney ka baxaan degaanka, iyagoo qaadan waayey Meydadka qiyaastoii 20 dagaalyahan kuwaasoo goob fagaare ah ay isku soo aruuriyeen ciidanka degaanka
Dadka deegaanka Baxdo ayaa xaqiijiyay in 3 ruux oo shacab ah ay dagaalkaas ku dhinteen, waxaa sidoo kale jira dhaawacyo fara badan oo loo soo qaaday degmada Cadaado oo qiyaastii 90km u jirta.
Allaha u naxariistee Shiikh Salaad Warsame Cabdi oo ka mid ahaa Culumada Ahlu sunna ee deegaanka Baxdo caanka ka ahaa ayaa ka mid ahaa dad ku geeriyooday dagaalkii deegaankaas ka dhacay.
Maamulka Baxdo ayaa sheegay sidoo kale in Gaari nuuca Leylo Calaawi Soomaalidu u taqaan ay ka furteen kooxda soo weerartay magaalada kaasoo ahaa mid qaraxyo lagu soo xiray, waxaana sidoo kale nolosha lagu qabtay ninkii waday gaarigaas ee doonayey inuu isqarxiyo.
Bilo ka hor ayay kooxdu sidaan oo kale weerar ugu qaaday deegaanka waxaana ay kala kulantay khasaare xooggan.
Russia-Ukraine live news: Leaders back EU path for Kyiv